Akụkọ - ụkpụrụ nke ngwa anya eriri laser Cleaner
Ụkpụrụ nke ngwa anya eriri laser Cleaner
Nhicha laser bụ nke ọgbara ọhụrụ na usoro nhicha, na n'ihi ọtụtụ uru ọ na-enye, ọ na-edochi ngwa ngwa usoro ọdịnala dị ka ịgbawa ice akọrọ ma ọ bụ ịgba ọkụ ọkụ.
Ọ na-enye nke a mma n'ihi na ọ na-arụ ọrụ dị nnọọ iche na gara aga process.Furthermore, ojiji nke eriri lasers dị ka a na-ajụ na-arụ ọrụ dị nnọọ iche na ndị ọzọ ụdị ihicha method.We inyocha nke a n'ụzọ zuru ezu n'okpuru, na-akọwa ihe mere laser ihicha bụ kasị dị irè. , nchekwa nchekwa, na ọnụ ahịa ihicha ngwọta na ahịa.
Kedu ka nhicha laser si arụ ọrụ?
Ebumnuche nke usoro a dị mfe: ihicha elu nke ihe (dị ka ígwè).
A na-eme nke a maka ọtụtụ ihe kpatara ya, dị ka ịme ihe ọkpụkpụ ma ọ bụ na-akwadebe ọgwụgwọ elu. Mgbochi n'oge mmepụta nwere ike ịmepụta ihe ndị na-emerụ emerụ gụnyere carbon, nchara na roba, na nhicha laser na-enye ụzọ dị irè na nke enyi na gburugburu ebe obibi iji wepụ ha.
Yabụ kedu ka usoro a si arụ ọrụ n'ezie?
Igwe ọkụ laser na-emepụta pulse n'elu ihe nke na-eme ka ihe na-egbuke egbuke ma na-awụ akpata oyi akwa nke ihe ruo mgbe a ga-erute ncha nhicha ahụ achọrọ.
Enwere ike ịchịkwa ike mmepụta na ogologo oge nke pulse, na mgbe ọ na-abịa na njedebe dị elu nke ihe dị ọcha nke ihe dị n'elu, onye ọrụ nwere nzube nke ghara imebi ihe ahụ.
ihe na-emerụ emerụ n'elu ihe ahụ, dị ka rubber ma ọ bụ agba, na-etinye ọkụ ọkụ ka ọ na-adaba n'elu ya. Ike nke ọkụ na-adaba ngwa ngwa.
Gịnị kpatara usoro a ji dị mma karịa usoro ọdịnala?
Otu isi ajụjụ a na-ajụkarị anyị bụ "Olee otú nhicha laser si arụ ọrụ dị iche na ụzọ ndị ọzọ na omenala?" Laser na-enyere aka dozie ụfọdụ isi okwu.
Nke mbụ, usoro omenala bụ usoro kọntaktị, nke pụtara na ha na-eyi, na-emebi emebi ma na-emebi ihe ha na-arụ ọrụ. Mgbawa mgbasa ozi, dịka ọmụmaatụ, na-arụ ọrụ n'ezie dị ka ihe nrụgide nrụgide, ma na-eji ikuku na-agbanye ọkụ na-eme ka ihe ahụ sie ike ruo mgbe. dị ọcha.Ọ nwere ike mezue ọrụ ahụ, mana ọ na-emetụtakarị ihe ị na-achọghị imebi!
N'aka nke ọzọ, ihicha laser bụ onye na-adịghị na kọntaktị na nke na-adịghị mma na ya mere naanị na-egbuke egbuke ihe ịchọrọ iwepụ.
The laser washer nwere ike n'ụzọ ziri ezi ịchịkwa ebe nhicha na omimi, nke pụtara na ị nwere ike iru omimi nke ị chọrọ. Ọzọkwa, ị nwere ike na-enwu n'elu elu oyi akwa nke ihe onwunwe, ma ọ bụ karịa na mpaghara, dị ka agba imecha, ma ọ bụghị primer n'okpuru. .O siri ike ịnụ ụtọ nchịkwa dị elu dị otú ahụ ma ọ bụrụ na ejiri usoro nhicha omenala mee ihe.
Otu uru dị ukwuu nke ụzọ nhicha laser si arụ ọrụ bụ na ọ dịghị ihe mkpofu dị ukwuu n'oge nhicha;N'ụzọ bụ isi evaporation kama ịbụ ihe efu. Ọtụtụ n'ime ihe mkpofu fọdụrụnụ bụ uzuzu uzuzu, nke onye ọrụ na-anakọta ma wepụ ya ngwa ngwa.
Usoro ọdịnala ahapụla nnukwu ihe mkpofu nke a ga-ewepụrịrị. Ọ bụghị naanị na nke a dị oke ọnụ n'ihe gbasara ịrụ ọrụ oge, ma ọtụtụ ihe mkpofu dị ize ndụ, na ndị ọrụ na-achọkarị iyi uwe nchebe. E wepụwo ihe ize ndụ a na nchekwa ndị ọrụ site na iji ya. lasers.
Ya mere, usoro nhicha laser dị iche na usoro ọdịnala na:
1. Nke a bụ usoro dị nchebe karị
2, arụmọrụ dị elu
3. Ọ na-enye ndị ọrụ nke ọma na ọkwa nchịkwa dị elu.
4. Lezienụ anya na nsonaazụ njedebe dị elu dị elu